Justice League vs the Fatal Five (2019) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
PG-13 2019 77 min Animation
Match လ ၃၀ရက်နေ့နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Justice Leagueနောက်ဆုံး Animationလေးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
DC ရဲ့ ထုံစံအတိုင်းပဲ Animation ဟာအရမ်းကို ကောင်းမွန်တဲဇာတ်ကားလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၃၁ရာစုသောင်းကျန်းနေတဲ့ Fatal Five လို့ခေါ်တဲ့ Villain များဟာ ၂၁ရာစုကိုရောက်လာပြီး သူတို့ထဲက အဖမ်းခံထားရတဲ့ခေါင်းဆောင်ကို ဂရင်းလန်တန်များလက်ထဲကလွတ်မြောက်ရန်ကြိုးစားကြတာပါ။
ထို၃၁ရာစုကနေ ဟီးရိုးတစ်ယောက် Star Boy ပါလာပြီးတော့
Fatal Five နဲ့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ….
စိတ်ဓာတ်ပျက်ပြားနေတဲ့ ဂရင်းလန်တန် တစ်ယောက် Fatal Five နဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ..
Justice League တောင် Fatal Fiveကို မယှဉ်နိုင်တဲ့အခါ….
Translated By SharHtet Paing
Option 1 mfile.cloud 350 MB SD (480p)
Option2storage.msubmovie.com 350 MB SD (480p)
Option3drive.google.com 350 MB SD (480p)
Option4drive.google.com 350 MB SD (480p)
Option5storage.msubmovie.com 789 MB HD
Option6mfile.cloud 789 MB HD
Option7drive.google.com 789 MB HD
Option 8 drive.google.com 789 MB HD
Option9mfile.cloud 2.4 GB FHD DTS-HDMA 5.1
Option 10 storage.msubmovie.com 2.4 GB FHD DTS-HDMA 5.1
Option 11 drive.google.com 2.4 GB FHD DTS-HDMA 5.1
Option 12 drive.google.com 2.4 GB FHD DTS-HDMA 5.1